Indlwana yezithandani ene-sauna - I-Airbnb
Indlwana yezithandani ene-sauna
I-indlwana ephelele ibungazwe ngu-Madara
U-Madara Ungumbungazi ovelele
Sinikeza i-guesthouse yethu ethandekayo ne-sauna kanye nobhavu wamanzi ashisayo ezivakashini zendawo yase-Helsinki ezazisa imvelo, ubumfihlo futhi mhlawumbe indilinga yegalofu- sitholakala khona kanye ngo-12th green of Kullo Golf kanye no-40km ukusuka esikhungweni sase-Helsinki. Indlwana yibhilidi elidala, elilungiswe ngokucophelela ukuze lilondoloze umoya wayo kuyilapho lihambisana nezidingo zomthandi wokunethezeka.
- Ubhavu wamanzi ashisayo (60e/usuku lokuqala, 30e/usuku ngalunye olulandelayo)
Isakhiwo, kusukela ngonyaka ka-1920, siyindlu yendabuko yase-Finland yokungena ngemvume. Inezinto zokushisisa zikagesi (okuhlanganisa okokushisisa phansi ephaseji nama-shower) nendawo yokubasa umlilo ezokwenza ukuhlala kwakho kube mnandi phakathi nezinsuku zasebusika ezibandayo.
Ikhishi elincane lilungele ukupheka okulula. Ifakwe ifriji nefriji encane, uhhavini we-microwave (alikho uhhavini ovamile), ipuleti lokupheka eliyi-1, i-water boiler, i-toaster nomshini wekhofi. Uzothola futhi izitsha, ezinye izinto eziyisisekelo zokupheka, izinongo, ikhofi netiye. Uzophinde ube ne-BBQ yamalahle kudekhi yakho (uphathe amalahle!)
Umbhede omkhulu ongu-1, omatilasi abangu- 2, Umbhede wengane e-1
Indlwana itholakala ekhoneni ledolobhana lasemaphandleni elincane nelinokulala, elivalelwe phakathi kwegalofu nolwandle. Indlwana iseduze ne-Helsinki ne-Porvoo, ixhumene kahle nemigwaqo emikhulu.
Indawo yokudlela yekilabhu yezwe iseduze, inikeza isidlo sasemini esiconsisa amathe nsuku zonke. Kukhona ne-pizzeria yendawo eletha ikhaya kanye ne-BBQ esontweni elidala. Ngaphandle kwalokho, izindawo zokudlela eziseduze, izitolo namasevisi zise-Porvoo.
I-Helsinki-Porvoo highway ingamakhilomitha angu-3 ukusuka endlwaneni.
Isikhumulo sezindiza sase-Helsinki-Vantaa singengxenye yehora ngemoto.
Ichweba lase-Kilpilahti nendawo yezimboni itholakala amakhilomitha ambalwa phansi ogwini- ama-chimneys angabonakala egcekeni lethu ngosuku olucacile, futhi umoya waseningizimu uphatha imisindo ezwakalayo.
Indlwana ihlezi emahlathini, kodwa ayilona uhlobo lwendawo ethi 'off-grid'.
Asihlali endlini, kodwa ungasithinta ocingweni uma udinga noma yiluphi usizo phakathi nokuhlala kwakho.
UMadara Ungumbungazi ovelele
Hlola ezinye izinketho ezise- Porvoo namaphethelo